Imveliso yobugcisa beCrafti -Udityaniso lweNkqubo yokuNgcweliswa - izixhobo-izixhobo-iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ukuveliswa kweBhiya yobugcisa-Uhlobo oludibeneyo lweNkqubo yokuNgcweliswa-izixhobo zezixhobo ezibini
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 34
Amandla okungcwalisa yenye yezona zinto ziphambili zichonga ukuphuma kwebhiya, kwaye indibaniselwano yezixhobo zokungcwalisa inxulumene nokusebenza kwemveliso kunye nenqanaba lotyalo-mali lwenkqubo yokungcwatywa.
Ukudityaniswa kwamacandelo amabini (isixhobo saseMelika):
Ukucoca inkqubo yokuhluza, iketile yeWort kunye nenkqubo yokuhamba.
Olu dibaniso lunokucoca malunga neebhetshi ezimbini ngosuku. Esi sixhobo sinokusebenzisa okuphezulu kwezixhobo, iindleko eziphantsi zotyalo-mali lwezixhobo, kodwa imveliso ephantsi.
1.Ukucoca ulwelo kunokusetyenziswa kuphela kwindlela yokukhupha. Kuba ukusebenza kwempompo akukho lula kakhulu, isiphumo sokuhluza sokwenza iintlobo ezahlukeneyo zebhiya siza kubonisa imeko eyahlukileyo. Umzekelo, ibhiya yengqolowa yenziwa ngesiqingatha semitha yengqolowa, ngoko ke incangathi kwaye iyahluzwa kancinci. Xa isantya sempompo singalawulwa kakuhle, siyakubangela imeko yokupompa, kwaye ingqolowa yeengqolowa iqinile kakhulu, ukucoca kunzima kakhulu, kwaye kukhokelele ekuguqukeni kwesitya se-sieve.
2. Imvula ye-cyclotron iyakwenziwa kwinkqubo yokungcwatywa, kwaye kukho isirhorho esakhelwe ngaphakathi, ubukho besirhorho kuya kunciphisa kakhulu ifuthe lecyclotron.
Iityali ezi-3.Wort kufuneka zilungiswe kwangaphambili, kwaye ezinye izikhongozeli ezinokubakho kufuneka zilungiselelwe itanki yokubamba amanzi ashushu. Kungcono ukuba nefuthe lokulondolozwa kobushushu.Kodwa ukusebenza kunzima kakhulu.
Ukuba uyaluthanda olu hlobo lwezixhobo, ungenza utshintsho, itanki lokucoca iphezulu kunebhotile yokuhlanjululwa, yenza umahluko kwinqanaba eliphezulu, inokufezekisa ukuhluza kwendalo, impompo ye-wort isebenzisa ulawulo lokuguqula amaxesha, inokulungisa isantya sokuhamba, ukulima Imela yemela isebenzisa ukuguqulwa kwamaza emoto, hlengisa isantya sokujikeleza kwemela yokulima. Ngoku abavelisi abaninzi ukuze bonge iindleko, bathathe ngokuthe ngqo inqanaba lolwelo, ngoko ke ayilunganga, kuyacetyiswa ukuba kufakwe inqanaba lolwelo, ucofe umngxunya wokucoca ukonyusa ibhodi yokuhambisa amanzi.
Ngaba ucinga ngokuqala iprojekthi yakho yobugcisa? Ngaba uyafuna ukufumana ingxelo elungelelanisiweyo yeprojekthi yezixhobo zobhiya? Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi wellish@nbcoff.com, siya kusenzela isikimu seprojekthi eyonelisayo.
Previous: Amanqaku okuSebenza kwezixhobo zeBhiya yoBugcisa
Okulandelayo: 500L Brewhosue Turkey Project Phantsi Production